Ukutshabalalisa abanye ngemoto yakho eyenziwe nguwe kwiMinecraft Car Crusher | I-Androidsis
UManuel Ramirez | | Ihlaziywe 20/02/2020 11:39 | Imidlalo ye-Android, Minecraft
I-Minecraft isetyenziswa apha njenge "injini" apho iCrus Crusher yenziwe khona. Isihloko se-Android yinto emnandi kwaye enamanqaku angaphezulu kokuzenza ukuba abonakale kwiVenkile yeGoogle Play.
Sithetha ngeyona ndawo iphambili njengaleyo ye-Minecraft touch ehlala itsala umdla omkhulu kwimbonakalo, leyo ungazakha ezakho izithuthi kunye nokhuphiswano ngexesha lokwenyani ngokuchasene nabanye abadlali abaya kubeka uyilo lwabo kuvavanyo. Umdlalo weMinecraft oza kuba ngumdlalo wabadlali abaninzi wokudlala.
1 Yakha eyakho imoto ukutshabalalisa eyabanye
2 IMachacaCoches kunye nesanti yayo
3 Umdlalo ukuzama
Yakha eyakho imoto ukutshabalalisa eyabanye
IMachacaCoches ngumdlalo omnandi kakhulu kwinyani yokwenza imoto yakho balandele abanye esazulwini sentlabathi. Isihloko sabadlali abaninzi apho lowo ugcina imoto yakhe ibaleka ngelixa abanye beshiywe ukuba barhuqe emva kokuba bebalekile kwaye betha abanye baya kuba boyisile.
Un isihloko kakhulu "Minecraft" ngokubonakalayo nakwinjini enalezo tyhubhu kunye nezo ntloko zineentloko ezinkulu. Kubalandeli bomdlalo owenziwe nguMojang, kuyakuba ngaphezulu kokuthakazelisa kunye nokonwaba ukuba nexesha elimnandi lokungqubana naye wonke umntu.
KwiMachacaCars khange balibale nange-physics yezinto kwaye imoto yakho inokuncitshiswa kwisisu semoto ukuze ulahlekelwe ngaphambili, iivili kunye nezinye izinto oza kuzifumana. Inyani yile yokuba kuyahlekisa ukubona imoto yethu ngaphandle kwevili izama ukunqanda konke okunye okuzayo kubo.
IMachacaCoches kunye nesanti yayo
Iimoto zakwaMachaca zibeka indlela othetha ngayo ekwenziweni kwesithuthi sakho kunye nomhleli Apho unokubeka khona isisu sakho uze udibanise iivili, imida kunye nolunye uthotho lwezinto ezinokukunceda ekuqhubeni isithuthi, uzinzo kunye nokukwazi ukujika ngesantya esiphezulu.
Nantsi into eyakha imoto enganyangekiyo, kodwa nayo khawuleza ngokwaneleyo ukuze wenze owona monakalo mkhulu Kuzo zonke izinto esizithabathayo Xa singena entlabathini kuya kufuneka sibe nezakhono kakhulu kwivili ukuze sithathe isantya esifunekayo kwaye ngaloo ndlela sibethe ngasekhohlo nasekunene. Yeyona nto ifumana amanqaku kwaye yintoni eya kwenza umonakalo ongaphezulu kwezinye izithuthi ukuze kancinci kancinci kube nzima kubo ukuqhuba.
IMachacaCoches ikwasivumela ukuba senze isizalwane ngoko manyanani kwiiMfazwe zeSizwe kwaye oko kusivumela ukuba sifumane olunye uthotho lwemivuzo yokuqhubela phambili ngokukhawuleza. Ngumdlalo wabadlali abaninzi kwaye babeke yonke into ukuze uzive uyinxalenye yoluntu. Kwaye esithetha ngayo ikwiintsuku zayo zokuqala kwiVenkile yokudlala, ke musa ukuchitha ixesha kwaye uzise oogxa bakho.
Inyaniso kukuba ngeenxa zonke apha siye sonakalisa iMinecraft kakhulu, silinde sele siseMinecraft Earth, kwaye kufuneka umdlalo walolu hlobo ubuyisa iinkumbulo ezimnandi kodwa ngebhonasi eyongeziweyo yokukhwela kwimoto yethu yokubaleka. Siphinda sibeke isandi kwakhona kwezinye zoopopayi kunye nendlela esebenza ngayo ifiziksi yezinto ukuze amaxesha ahlekisayo aveliswe ngezo zibetho.
Umdlalo obuyimpumelelo kwezobuchwephesha kwaye ujonge ngokubonakalayo kwilizwe leMinecraft. Khankanya ulwenziwo xa usakha izithuthi kunye nesantya ezingathatha iimoto zethu xa sisebenzisa i-turbo. Umdlalo olumkileyo ofuna ukutsala umdla wamawaka wabadlali. Ngokuqinisekileyo baya kuyifumana ngexesha elifutshane.
IMachacaCoches iza kwi-Android simahla ukuze ungene ebhokisini okanye ube nomonde wokuvula izinto ezahlukeneyo onokuthi wakhe ngazo isithuthi esingcono. Ungathini ukuba sijamelene nomdlalo we-freemium, ke sele uyazi ukuba ulindelwe kwesi sihloko apho ukonakalisa iimoto zabanye abantu kuyinjongo, ulindele ntoni ngoku?
Yenza iimoto zakho zokubaleka
Ixesha lokuqhuba ngokuchasene nabanye lipholile
Umthuthukisi: I-Naquatic LLC
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Tshabalalisa abanye ngemoto yakho eyenziwe nguwe kwiMinecraft Imoto Machaca
Ifowuni yeRazer ngoku iqinisekisiwe ukufumana iPie ye-Android